UNICEF Myanmar: September 2015
Critical early days - giving birth inahealth facility
Baby Nang Mya with his mother and family at home in Loi Lomt village, Southern Shan State
Taunggyi, Southern Shan State, September 2015: Onapouring rainy day in October 2014 in the remote village of Loi Lomt, 24 year old Nang Khe gave birth to her fourth child with the assistance ofamale traditional birth attendant. After delivery, Nang Khe fell semi-unconscious suffering from very low blood pressure due toaretained placenta.
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ အနောက်မြောက်ပိုင်း၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၁၃ ရက်
ဓာတ်ပုံ - မျိုးသိမ်း
မြန်မာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်း၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကလေးမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သော ကလေးသူငယ်များနှင့် ၎င်းတို့၏ မိသားစုများသည် အဆိုးရွားဆုံးသော ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ်ကို တွေ့ကြုံ ခံစားခဲ့ရပြီး ဖြစ်သည်။ တချို့ကျေးရွာများဆိုလျှင် လုံးဝပျက်စီးလုနီးပါးအခြေအနေသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
စစ်ကိုင်းအစရှိသော မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ရေတဖြည်းဖြည်းချင်း ကျလာသည်နှင့်အမျှ ရေများသည် အောက်ဘက်သို့ ဆက်လက်စုန်ဆင်းနေပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ပြည်သူ ၃၀၀,၀၀၀ ကျော်ကို ကြီးစွာ အန္တရာယ်ပြုခြိမ်းခြောက်လျက်ရှိသည်။
ယူနီဆက်ဖ်သည် အခြားသော ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂအေဂျင်စီများနှင့် လက်တွဲလျက် မြန်မာနိုင်ငံအစိုးရ အာဏာပိုင်များနှင့် အနီးကပ် ပူးပေါင်းကာ ရေလွှမ်းမိုးမှုကြောင့် ပျက်စီးမှုတန်ဖိုးများကို အကဲဖြတ် ဆန်းစစ်ခြင်း၊ သန့်ရှင်းပြီး ဘေးအန္တရာယ်ကင်းသောသောက်သုံးရေ ရရှိရေးအတွက် လိုအပ်ချက်များနှင့် ပြန်လည်နလန်ထူနိုင်ရေးလိုအပ်ချက်များကို အလျင်အမြန် ဖြည့်ဆည်းပေးရန် အရေးပေါ် အထောက်အပံ့ များကိုပေးအပ်ခြင်း၊ အရေးပေါ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးအပ်ခြင်း၊ ကျောင်းနှင့် အိမ်များကို ပြင်ဆင်ပေးခြင်းနှင့် ကလေးသူငယ်များ၏ စိတ်သက်သာရာရမှုအတွက် နှစ်သိမ့်ပေးခြင်း စသည်တို့ကို ဆောင်ရွက်လျက် ရှိပါသည်။
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ကလေးမြို့နယ်မှ ငါးမိုင်အကွာရှိ ရေလွှမ်းမိုးမှုဒဏ် အဆိုးရွားဆုံးခံရသော ဒေသများမှ တစ်ခုတွင် အိမ်များနှင့်ကျောင်းများ ယခုကဲ့သို့ ပျက်စီးသွားကြသည်
©UNICEF Myanmar/2015/Myo Thame
Labels: child Health, Emergency, Flooding, Myanmar, UNICEF
၂၀၁၅ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေး ဖော်ဆောင်ပေးသူကို မဲပေးကြပါစို့
ရန်ကုန်၊ ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် –-- ရန်ကုန်မြို့တွင် ဩဂုတ်လ ၂၈ ရက် သောကြာနေ့၌ ကျင်းပခဲ့သော လူ ၂၀၀ တက်ရောက်ခဲ့သည့် ”ကလေးသူငယ်အခွင့်အရေးဖော်ဆောင်ပေးသူကို မဲပေးကြပါ” ဆိုသည့် တက်ကြွလှုပ်ရှားစေသည့် ဖိုရမ်ကို သွက်လက်သောဖျော်ဖြေမှုများနှင့် ပေါ့ဂီတဖြင့် ဖွင့်လှစ်ခဲ့ သည်။
နိုင်ငံရေးပါတီများ၏ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှုမစတင်မီ ကိုးရက်အလိုတွင် ကလေးငယ်များကို ဦးစားပေးသည့် ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေး မဟာဗျူဟာတစ်ခုကို အသုံးပြုရန် နိုင်ငံရေးသမားများအား ကလေးငယ်များက တောင်းဆိုခဲ့သည်။
Labels: child rights, Election, Myanmar, political parties, Save the children, UNICEF
The power of education to buildajoint future for all children in Rakhine State
By Andy Brown, Communication Specialist, UNICEF East Asia and Pacific Regional Office
Thu Zar (right) studies withafriend inaclassroom at Thea Chaung IDP camp
Hlaing Hlaing Oo (left) studies inaGrade6class at Mingan School
Rakhine State is one of the poorest and most isolated parts of Myanmar, and suffers from complex humanitarian needs and unaddressed development needs. Already marked byahigh rate of poverty, the socioeconomic situation in Rakhine further deteriorated in 2012 following the outbreak of violence between majority Buddhist and minority Muslim communities, which displaced many Muslim communities, who were relocated in controlled camps.
Posted by UNICEF Myanmar 1 comment:
Labels: Back to school, Education, humanitarian, IDP Camp, Myanmar, Rakhine State, UNICEF
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကလေးများအားလုံး၏ ပူးတွဲအနာဂတ် တည်ထောင်ရန်အတွက် ပညာရေးစွမ်းရည်
ယူနီဆက်ဖ် အရှေ့အာရှနှင့် ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာရုံးမှ ဆက်သွယ်ရေးပညာရှင် အန်ဒီဘရောင်း ရေးသားသည်
သဲချောင်း ပြည်တွင်း၌ နေရာမဲ့ဖြစ်နေသူများ (အိုင်ဒီပီ) စခန်းရှိ စာသင်ခန်းတစ်ခုတွင် သူငယ်ချင်းတစ်ဦးနှင့်အတူ စာသင်ယူနေသော သူဇာ
မင်းဂံကျောင်းတွင် ပဉ္စမတန်းတက်နေသော လှိုင်လှိုင်ဦး
ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အဆင်းရဲဆုံးနှင့် အထီးအကျန်ဆုံးဒေသတစ်ခုဖြစ်ပြီး များမြောင်လှသော လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ လိုအပ်ချက်များနှင့် မဖြေရှင်းရသေးသော ဖွံ့ဖြိုးရေး လိုအပ်ချက်များ ရှိနေသည်။ အံ့အားသင့်ဖွယ် ကောင်းလောက်အောင်ပင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုမှာ ၇၈ ရာခိုင်နှုန်း ရှိနေရာ ရခိုင်ပြည်နယ်၏ လူမှုစီးပွားရေးအခြေအနေမှာ လူများစု ဖြစ်သော ဗုဒ္ဓဘာသာနှင့် လူနည်းစု မွတ်စလင်များအကြား အကြမ်းဖက်မှုများ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် ၂၀၁၂ ခုနှစ်တွင် ပိုမိုဆိုးရွားလာခဲ့သည်။ ယင်းပဋိပက္ခကြောင့် မွတ်စလင်အုပ်စုများစွာ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပြီး ထိန်းချုပ်ထားသော စခန်းများတွင် ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့ရသည်။ မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၁၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ၌ ဖြစ်ပွားခဲ့သော ရေလွှမ်းမိုးမှုများက အသိုင်းအဝိုင်းနှစ်ခုကြား ခွဲခြားထားသော ကာလရှည်ကြာစွာ အခိုင်အမာ အမြစ်တွယ်နေသည့် နယ်နိမိတ် စည်းကို လျစ်လျူရှုလျက် ဤပြသနာများကို ပိုမိုဆိုးရွားစေခဲ့သည်။
Labels: Education, IDP Camp, Myanmar, Rakhine State, UNICEF
Myanmar Elections 2015 – Let’s vote for one clear winner: CHILDREN
Yangon 28th August 2015: Dynamic performances and pop music greeted the two hundred participants at the upbeat forum “Let’s vote for one clear winner: Children” which took place in Yangon on Friday 28 August.
With9days to go before political parties depart on their campaigning trail, children called for politicians to adoptawinning strategy: prioritizing children.
Critical early days - giving birth inahealth fac...
၂၀၁၅ခုနှစ် မြန်မာနိုင်ငံ ရွေးကောက်ပွဲမှာ ကလေးသူငယ်...
The power of education to buildajoint future for...
ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ ကလေးများအားလုံး၏ ပူးတွဲအနာဂတ် တည်...
Myanmar Elections 2015 – Let’s vote for one clear ...